सुरज थापाको अत्यन्त मार्मिक गीत ‘हे बरै आएन परदेशी’ (भिडियोसहित) - The First Nepali Digital Newspaper from Australia (Ausnepal news)
सुरज थापाको अत्यन्त मार्मिक गीत ‘हे बरै आएन परदेशी’ (भिडियोसहित)
काठमाडौं । नेपाल आइडल सिजन—१ का प्रतिस्पर्धी सुरज थापाले नयाँ गीत सार्वजनिक गरेका छन् । ‘हे बरै आएन परदेशी…’ बालको गीत उनले आफ्नै युट्युबमार्फत सार्वजनिक गरेका हुन् । यस गीतको लिरिकल भिडियो भने केही समय पहिले नै सार्वजनिक गरिएको थियो ।
गाउँमा साहुसँग ऋण लिएर पैसा कमाउन खाडी मुलुक गएको छोरो नफर्किँदा परिवारले भोग्नु परेको पीडा गीतमा भनिएको छ । परिवन्दले कमाउन गएको छोरो जेलमा परेपछि त्यसले घर परिवार र ब्यबाहारमा पर्ने गरेको आम समस्यालाई गीतमार्फत सुरजले भन्ने प्रयास गरेका छन् ।
गीतमा सुरज थापाको स्वर, शब्द र संगीत रहेको छ । त्यस्तै धर्म गन्धर्वको सारङ्गी र किसन श्रेष्ठको गीत संयोजन रहेको छ । यस गीतको म्युजिक भिडियोमा मन बहादुर थापा (बाबा), दिलमाया थापा (आमा), चन्द्र बहादुर थापा (दाजु), कबी राम (जेठा बाबा) , तारा थापा (बहीनी), आरुशि (भाउजु) सुरज थापाका परीवारको अभिनय रहेको छ ।
सिड्नीसँगै चलचित्र ‘जात्रै जात्रा’ पुरा अष्ट्रेलिया भ्रमणमा
राजन घिमिरे, अष्ट्रेलिया । सिनेमाको मूल निचोड के हो ? यसको गन्तब्य र सिनेमाले देखाउन खोजेको कुरा के हो ? यो […]
काठमाडौं । ‘मिस नेपाल २०१९’ को उपाधि अनुष्का श्रेष्ठले जितेकी छन् । कीर्तिपुरस्थित ल्याब्रोटरी स्कुल […]
पशुपति शर्माको नयाँ गीत-‘हजुर हाम्रै पाला,जसरी नि बनाउँने हो क्रिकेट रङ्गशाला’
काठमाडाैं । चर्चित लोकदोहोरी गायक पशुपति शर्माको नयाँ गीत सार्बजनिक भएको छ । लुट्न सके लुटको विवाद पछि […]
रवि ओडको दोस्रो गीत ‘दुई कौडीको बुद्धि’ सार्वजनिक (भिडियो सहित)
काठमाडौं । नेपाल आइडल २ बनेपछि चर्चा परिचर्चामा रहेका रवि ओडको दोस्रो गीत सार्वजनिक भएको छ । दुई कौडिको बुढि […]
‘एभेन्जरः इन्ड गेम’ सर्वाधिक व्यापार गर्ने चलचित्रको दोस्रो स्थानमा उक्लियो
एजेन्सी । विश्वभर चर्चित हलिउड फिल्म ‘एभेन्जर’ सिरिजको बहुप्रतीक्षित फिल्म ‘एभेन्जरः इन्ड गेम’ सबैभन्दा […]
एजेन्सी । सुपरस्टार सलमान खानको फिल्म भारतको ट्रेलर २४ अप्रिलमा प्रदर्शनमा आउँन लागेको छ । उनको यो भन्दा […]